SAMBABKA RIYAHA: Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP)
Monday February 15, 2010 - 22:42:43 in News & Events by Super Admin
Cudurka Sambabka Riyaha
Cudurka Sambabka Riyaha meelaha ay Soomaalida xoolo-dhaqatada ahi degto waxaa looga yaqaan magacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin : Riinweyne, Haarweyne iyo Gees-dhowr
Magacyadaasi mid kastaaba wuxuu sifaynayaa ama tilmaamayaa astaamaha ay dadku ku arkeen neefka cudurkani ku dhaco ama hadba xoolaha nooca uu saameeyo; Riinweyne iyo Haarweyne oo macnahoodu isku dhow yahay waxay tilmaamayaan taah ama jibaad muujinaya in neefku aanu si caadi ah u neefsan karin oo dhibaato jirto.
Gees-dhowr macnihiisu waxaa weeye cudurkan wuxuu eegtaa geeska riyaha oo keliya laakiin kuma dhaco idaha ay xerada ku wadajiran.
Magaca Sambab laftiisu wuxuu sheegayaa in cudurkaasi saameeyo sambabada neefka uu ku dhaco.
Cudur Keenaha iyo Isugudbinta
Cudurka Sambabka Riyaha waxaa keena nooc ka mid ah nafleyda yar-yar ee loo yaqaan Bakteriyada qayb ka mid ah.
Habka isugudbintu ama sida ay xooluhu isu qaadsiiyaan badanaaba waa mid toos ah ; markii neefka buka neeftiisu ama dheecaanada habka neefsigu (duufka /qufaca) gaadhaan kan fayow ama neefka caafimaadka qaba.
Sida magaciisu sheegayo cudurkani wuxuu ku dhacaa oo gaar u yahay riyaha ama ari cadka. Cudurkan Sambabku deg-deg ayuu ugu fidaa ama ugu faafaa riyaha, meelaha aanu muddo ka dhicina wuxuu saamayn karaa oo ku dhicikaraa 100% (boqolkiiba boqol) riyaha, waxaana dhimashadu gaadhi kartaa ilaa 70% (boqolkiiba todobaatan), laakiin meelaha guriga u ah cudurkan ee uu sida joogtada ah uga dhaco dhimashada uu sababaa intaas way ka yartahay.